DHAGEYSO: Qoorqoor ”Waa lagu guul-dareystay dhex-dhexaadintii Madaxda DFS & D/goboleedyada” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Qoorqoor ”Waa lagu guul-dareystay dhex-dhexaadintii Madaxda DFS & D/goboleedyada”
DHAGEYSO: Qoorqoor ”Waa lagu guul-dareystay dhex-dhexaadintii Madaxda DFS & D/goboleedyada”
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad gobleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa sheegay in howlihii dhex-dhexaadinta aheyd ee uu ka dhex waday Madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay guuldareysteen.
Qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in dhex-dhexaadintiisii ay tanaasul badan sameeyeen Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, hayeeshee uu wax jawaab ah ka waayay Madaxweynayaasha Puntland iyo jubbaland.
”Waxaan rabaa inaan halkaan ka caddeeyo in wali aysan wax jawaab ah kasoo noqon saaxiibadayda Puntland iyo Jubaland dhexdhexaadintii aan halkan u imid iyo natiijadii wanaagsanayd iyo tanaasulkii ay ii muujiyeen Madaxda Qaranka” ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Galmudug ayaa hadalkaan sheegay xilli uu kulan ay isugu yimaadeen Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxda Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, islamarkaana ay ku dhawaaqeen in doorashada la qabanayo.
Halka hoose ka dhageyso Codka Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor: